Qaramada Midoobay Oo Ka Xun Mamnuucidda Alshabaab Ee Mobile Internet & Fiber Optic – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Qaramada Midoobay ayaa ka hadashay tallaabada Ururka Al-Shabaab ay ku sheegeen inay ku mamnuucayaan adeega Mobile Internet iyo Fiver Optic.
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Nichlos Kay oo Wareysi siiyay Idaacada Risaala ee Muqdisho, ayaa niyadjab ku tilmaamay in koox gaar ah ay joojiso adeeg Internet oo Bulshada ay u wada baahan yihiin.
Wuxuu sheegay Kay in qof waliba uu doonayo helida Internet uu ka helo aqbaar kala duwan iyo aqoon.
Wuxuu arrin wanaagsan ku tilmaamay in Soomaaliya la keeno adeega Fiber Optic Internet oo qof waliba oo Soomaali ah uu helo adeeg Internet oo wanaagsan.
Mr. Kay ayaa wuxuu qeexay in Al-Shabaab ay kasoo horjeedaan horumarka dalka Soomaaliya iminka ay ku tilaabsanayo, xilli la helayo adeegyo muhiim ah oo dalka aas-aasi u ah sida uu yiri.
Al-Shabaab ayaa dhawaan shiradaha Isgaarsiinta ku amartay iney joojiyaan adeega Internet Mobile iyo Fiber Optic, iyagoo sheegay in iyaga lagu basaasayo, islamarkaana soo kordhinayo dhaqan xumo.